Ahoana no fomba hahombiazako amin'ny Pinterest? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 641
Pinterest dia sehatra iray androany izay manome alalana ny olona haneho ny tsara indrindra sy ny nofinofin'izy ireo momba ny tetikasa ho avy tian'izy ireo ho tratrarina. Noho izany rehetra izany dia ilaina ny fampisehoana fikirizana, fa ambonin'izany rehetra izany, ny fiaraha-miasa izay hiasa ho toy ny fitaovana ilaina amin'ny fahombiazana.
Na dia mangataka anao hiseho amin'ny horonan-tsary farafahakeliny 10 segondra ao anatin'ny pejy iray aza ireo sehatra hafa, amin'ny Pinterest kosa ny mifanohitra amin'izay no mitranga. Ny iray amin'ireo zavatra tokony hataon'ny olona liana amin'ny fahombiazana amin'ny tambajotra dia ny famoronana fotoana sy hevitra ho an'ny fiaraha-monina.
Ireo olona mijery safidy ao amin'ny Pinterest dia mahita ny tsara indrindra avy aminy hanavao ny tranony, toeram-piasana ary manomboka tetikasa manokana mihitsy aza. Misaotra an'izany rehetra izany fa hampiharina izay rehetra hita eo amin'ny lampihazo.
Mahomby amin'ny Pinterest
Mpampiasa maro no naneho an'io Pinterest dia iray amin'ireo sehatra tsara indrindra izany dia ny fanatanterahana ny nofy sy ny hevitry ny mpampiasa ankehitriny. Hatramin'ny namoronana azy dia tsy afaka nanamarika ny tolona notazominy izy io noho ny tsy hitovizany amin'ireo tambajotra hafa ary manoloana an'io, ialao ny olana amin'ny ho avy.
Amin'ity indray mitoraka ity dia hianaranao kely momba ny fanatsarana ny kalitaon'ny zavatra atao ao anatin'ny Pinterest ary ambonin'izany rehetra izany, ny fomba ahafahanao mandroso miaraka amin'ireo fitaovana famoronana rehetra tianao.
Mifandraisa amin'ny tamba-jotra hafa
Miankina amin'izay hetsika hatao ao amin'ny Pinterest ary ambonin'izany rehetra izany, ny sary tokony hoforonin'izy ireo dia tsara ny apetraka fiasan'ny lakilen'ny fifandraisana.
Ity fandraisana an-tanana ity dia handray ireo mpampiasa hafa hahita ny atiny vaovao rehetra tokony homeny amin'ny fotoana mety. Ho fanampin'izay, ho tonga amin'ny fotoana sy toerana rehetra ny dokambarotra hahazoana vokatra tsara kokoa.
Ataovy miavaka ny URL-nao
Raha tianao ny hahitan'ny olon-kafa anao amin'ny motera fikarohana dia mety mila manova ny URL ianao mba hahazoana valiny tsara kokoa. Avy any, hanana ny feno ny olona midira avy amin'ny toerana rehetra mankany amin'ny sehatra Pinterest anao.
Lazalazao ny sarinao
Rehefa mamorona tabilao, na manao pin vaovao fotsiny dia tena ilaina ny mametraka famaritana. Izany dia hanampy ny mpampiasa hahafantatra hoe avy aiza ianao ary aiza no alehanao nefa tsy mihady sy tsy mahazo izay tadiaviny na tsy ananany.
Hevitra tsara ihany koa ny fampiharana fahalalana SEO rehetra azonao atao izany na tianao ho azo. Tsy isalasalana fa noho io, betsaka ny olona mety hahita anao eny amin'ny lampihazo.
Inona no tsy tokony hatao amin'ny Pinterest?
Ankehitriny, zava-dehibe ny hahafantaranao izay zavatra tsy mendrika handray anjara amin'ny Pinterest.
Tokony hialanao ny fandefasana sary vetaveta na saropady ao amin'ny Pinterest
Tsy afaka manafintohina ireo mpampiasa eo amin'ny lampihazo ianao
Ilaina ny famalianao ny hafatra rehetra ao amin'ny Pinterest
Ny tsimatra hizara dia tokony ho eo amin'ny solaitrabe ho an'ny fandaminana tsara kokoa
Hodinihina tsy tapaka ny kaontinao hahafantarana ireo hetsika
1 Mahomby amin'ny Pinterest
1.1 Mifandraisa amin'ny tamba-jotra hafa
1.2 Ataovy miavaka ny URL-nao
1.3 Lazalazao ny sarinao
2 Inona no tsy tokony hatao amin'ny Pinterest?